Buugaagta Kacaanka Ruushka
Erayga Kacaanka ee Ruushka #1
Erayga Kacaanka ee Ruushka #2
Erayga Kacaanka ee Ruushka #3
Erayga Kacaanka ee Ruushka #4
Erayga Kacaanka ee Ruushka #5
Erayga Kacaanka ee Ruushka #6
Erayga Kacaanka ee Ruushka #7
Cinwaannada Kacaanka Ruushka
Dukumiintiyada Kacaanka Ruushka
Su'aalaha qoraalada kacaanka Ruushka
Sawirrada naqshadaha Ruushka
Taariikhyahannada Kacaanka Ruushka
Khariidadaha kacaanka Ruushka
Kediska xusuusta ee kacaanka Ruushka - munaasabadaha 1907-1916
Kediska xusuusta ee Kacaanka Ruushka - dhacdooyinka 1917
Kediska xusuusta ee kacaanka Ruushka - munaasabadaha 1918-1924
Kediska xusuusta ee kacaanka Ruushka - kacaanyahannada
Kediska xusuusta ee kacaanka Ruushka - tsarists
Kediska xusuusta ee kacaanka Ruushka: fikradaha (I)
Kediska xusuusta ee kacaanka Ruushka: fikradaha (II)
Kediska xusuusta ee Kacaanka Ruushka: dhacdooyinka 1906 illaa 1913
Kediska xusuusta ee Kacaanka Ruushka: dhacdooyinka 1914 illaa 1916
Kediska xusuusta ee kacaanka Ruushka: dhacdooyinka ilaa 1905
Kediska xusuusta ee kacaanka Ruushka: fikradaha
Xusuusta xusuusta kacaanka Ruushka
Kediska kacaanka Ruushka #1
Kediska kacaanka Ruushka #2
Kediska kacaanka Ruushka #3
Kediska kacaanka Ruushka #4
Kediska kacaanka Ruushka #5
Kediska kacaanka Ruushka #6
Qufulka kacaanka Ruushka
Oraahyada kacaanka Ruushka
Mawduucyada Revolution Ruush
Kacaankii Ruushku yaa ahaa yaa
Ereyga Revolution ee Ruushka - fikradaha
Khudbaddii Kacaanka Ruushka - dadku
Erey-bixinta Kacaanka Ruushka - meelaha
Erayadii Kacaanka Ruushka
Kacaankii Ruushka waxay ahayd dhacdo deg deg ah oo aan kaliya beddelin koorsada Ruushka, waxay sidoo kale qaabeeysay qarnigii 20th adduunka oo dhan.
Dhamaadka qarnigii 20, Russia wuxuu ka mid ahaa boqortooyooyinkii ugu waaweynaa uguna xoogga badnaa dunida. Dhul-gariirku wuxuu ka fiday Yurub ilaa Aasiya wuxuuna ku baahay lix-meelood meel meel adduunka. Dadweynaha Ruushka waxay dhaafeen 100 milyan oo qof, oo ay ku daateen daraasiin kooxo qowmiyadeed iyo luqado kala duwan ah. Ciidankeeda nabad ee waqtigiisu nabbada ahaa wuxuu ahaa kan ugu weyn adduunka.
In kasta oo ay baaxad weyn iyo xoog leedahay, Russia waxay ahayd dhex-dhexaad sidii ay ahayd mid casri ah. Boqortooyada Ruushka waxaa xukuma hal nin, Tsar Nicholas II, oo rumeeyey awooddiisa siyaasadeed inay ahayd hadiyad ka timid xagga Ilaah. 1905, awoodda madax-bannaanida ee Tsar waxaa caqabad ku ahaa dibuhabaystayaasha iyo kacaan wadayaasha doonaya in la abuuro Russia dimuqraadiyad casri ah. Nidaamkii hore ayaa ka badbaaday caqabadaha 1905 - laakiin fikradaha iyo xoogagga ay soo furteen ma dhammaan.
Dagaalkii Dunida I u adeegay kobcinta kacaanka Russia. Sida khariidadihii kale ee hore ee Yurub, Russia waxay galeen dagaal si xamaasad leh oo aan ka fikirin cawaaqibka. 1917, dagaalku wuxuu sababay malaayiin dhimasho, wuxuu hoos u dhigay dhaqaalihii Ruushka wuxuuna yareeyey taageerada caan ah ee tsar iyo nidaamkiisa.
Nicholas ayaa laga qaaday awooda waxaana lagu badalay dowlad ku meel gaar ah - laakiin nidaamkan cusub wuxuu wajahay caqabado u gaar ah, sida cadaadiska joogtada ah ee dagaalka iyo xagjirnimada kacsan ee fasalada shaqada. Kacaan labaad ee Oktoobar 1917 wuxuu ku riday Ruushka gacantii Bolsheviks, hantiwadaag xagjirnimo ah oo uu hogaaminayo Vladimir Lenin.
Lenin iyo Bolsheviks waxay kor uqaadeen wanaagga Marxismka una ballanqaaday mujtamac wanaagsan oo ku saabsan fasalada shaqada. Laakiin iyagu ma sharfi karaan oo fulin karaan ballamahan? Lenin iyo nidaamkiisa cusubi ma hagaajin karaan xaaladaha shaqaalaha, iyagoo ka gudbaya burburka dagaal una jiidaya Russia adduunka casriga ah?
Websaydhka Shabakadda Kacaanka ee Ruushka 'Alpha History' waa xog dhameystiran oo tayo-sare leh oo loogu talo galay barashada dhacdooyinka ka dhaca Ruushka inta u dhaxaysa 1905 iyo 1924. Waxay ka kooban tahay inka badan 400 ilo kala duwan oo asaasi ah iyo mid sareba, oo ay kujirto faahfaahin soo koobid mowduuc, documents iyo matalaya jaantus. Websaydhkeenna sidoo kale waxaa ku jira waxyaabo tixraac ah sida Khariidadaha iyo khariidadaha fikradda, waqtiyada, Qaamuusyada ereyada, a 'yaa yaaiyo macluumaadka ku saabsan taariikh nololeed iyo taariikhyahanada. Ardaydu sidoo kale waxay ku tijaabin karaan aqoontooda oo ay dib ugu soo celin karaan howlo badan oo khadka tooska ah, oo ay ka mid yihiin su'aalaha, cinwaannada ereyga iyo Erey-bixin. Dhinacyada ilaha aasaasiga ah, dhammaan waxyaabaha ku jira Taariikhda Alfa waxaa qoraa macallimiin aqoon iyo khibrad leh, qoraayaal iyo taariikhyahanno.
Goobtani kacaanka ee Ruushka waxaa ku jira maqaallo, ilo iyo aragtiyo ka hadlaya dhacdooyinka ka dhacay Ruushka inta u dhaxaysa 1891 iyo 1927. Bartaan waxaa abuuray oo dayactiray Taariikhda Alfa. Waxay ka kooban tahay ereyada 173,003 ee bogagga 276 waxaana la cusbooneysiiyay Agoosto 3rd 2019. Macluumaad dheeri ah, booqo boggayaga wax isweydaarsiga ama shuruudaha adeegsiga.